“Velona Aho” Fampiharana Hahafahan’ireo Libaney Hifampatoky Aorian’ny Fipoahana Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2014 11:33 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Català, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Toa tahaka ny efa zatra baomba mihitsy ny Libaney hany ka toa tsy azo ihodivirana ny fampiharana natokana hahafantaran'ny olona akaiky anao fa velona ianao. Ny fampiharana izay mitondra ny anarana hoe “I Am Alive (Velona Aho) dia hevitra noforonin'i Sandra Hassan, 26 taona, mpianatra libaney monina ao Paris.
@GinoRaidy vita ratsy sy mampalahelo. Misy ireo fomba maro hafa hanoherana sy hilazana fa velona ianao
@GinoRaidy Tsy tiako ilay izy. Tahaka ny milaza aminay fa tsy ho voaaro mihitsy izahay.
Bilaogera momba ny Informatika sy ny Fifandraisana Erik Neu ao amin'ny Mondegreen nizara ny fihetseham-pon'izy ireo.
Na dia izany aza, bilaogera PSFK, Ross Brooks nanana fijery tsara mikasika izay atolotr'ilay fampihatra: